China Ogige ubi maka ehi, atụrụ, mgbada, onye na-emepụta ịnyịnya na onye na-ebu ngwaahịa | Oghere
PRO.FENCE na-arụpụta ngere ogige dị elu na waya waya galvanized ma kpaa ya ọnụ site na igwe ịkwa akwa akpaka. The waya ka zinc ntekwasa ruo 200g /㎡a ghọtara site na ezigbo mgbochi ya na ike dị elu. Ogige anyị nwere ike ịnagide ọnọdụ ihu igwe siri ike ma jigide ọtụtụ anụmanụ dị ike. Igwe akụrụngwa nke anyị na-eji ugbu a nwere ike ịhazi ụdị eriri dị iche iche gụnyere Monarch Knot, Square Deal Knot, Cross Lock knot na kwa dị iche iche, waya diamita. Kedu ụdị eriri na nkọwapụta iji jiri nke ahụ dabere na otu anụmanụ anụmanụ fencing siri ike. PRO.FENCE nwere ike inye gị azịza nke ahaziri iche iche ka ịchekwa ụmụ anụmanụ dị iche iche na nchekwa.
Tupu ịhọrọ ubi ugbo, ị ga-atụle ụdị anụ ụlọ ị na-achọ ịnwe. Ihe omuma a gha achoputa ngba ugbo di na mkpa gi. Animalsdị anụmanụ dị iche iche na akparamàgwà omume dị iche iche chọrọ ịdị elu, eriri waya, ụdị eriri. Dị ka mgbada na-ebugharị n'okporo ụzọ iji nweta nrụgide na ngere ahụ, n'ihi ya, ọ chọrọ ogige dị elu na-agbachi agbachi na nkwụsị 6inch. N'ihi na ehi bụ n'ozuzu kacha anụmanụ ka ngere na, Ya mere, anyị na-adụ ọdụ otu eriri ụdị na ibu spacing ma elu nsu. Ọ dị mkpa ịghọta ọdịiche ndị a ga - enyere gị aka ịhọrọ fencing n’ọrụ kwesịrị ekwesị.
Waya n'obosara: 2.0-3.6mm
Ntupu: 100 * 100mm / 70 * 150mm
Obosara: 30 / 50meters na mpịakọta
Emechara: kpaliri ya
Nsu a na-akọ ugbo bụ nke ogige kpara ma jiri waya igwe kpoo ya. Ọ na-abịa iji nye ngere ahụ dị elu ma na-eguzogide ujo ahụ sitere na ụmụ anụmanụ.
2) Ezi mgbochi corrosion
A na-edozi waya ahụ na akwa zinc tupu ịkwa akwa. Ihe mkpuchi zinc ruru 200g /㎡ ga-arụ ọrụ na mgbochi corrosion.
3) Mfe iji wụnye
Ogige ugbo ahụ dị mfe na nhazi ma dị mfe ịwụnye. Ọ na-achọ ịkwanye ọkwa ahụ n'ime ala na mbụ wee kwụnye ntanye waya ma gbanye ya site na iji waya.
4) Akụ na ụba
Usoro dị mfe na-abịa na obere ihe ga-enyere aka ịchekwa ego. Mkpọ ya na mpịakọta ga-echekwa ibu na mbupu na nchekwa yana.
Wodị a kpara nwere ike ịgbakwunye mgbanwe na ngere ahụ ma gbochie ụjọ site na ụmụ anụmanụ.
Nkebi NO.: PRO-07 Ebute :bọchị: -21BỌCH 15 15-21 Nbanye ngwaahịa: CHINA
Nke gara aga: Ugboro abụọ gburugburu Powder ntekwasa Waya ntupu ngere maka Municipal engineering
Osote: Galvanized welded waya nsu maka ugbo na ulo oru ngwa